Ny vinavinan'ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2030 araka ny PREPA | Fanavaozana maintso
Ny Wind Business Association (PREPA) dia nanomana ny singa ilaina amin'ny famakafakana angovo. Tolo-kevitra ho an'ny sehatry ny herinaratra', izay nalefany tany amin'ny komitin'ny manam-pahaizana momba ny tetezamita angovo.
Ny tanjon'ny fikambanana dia ny fanaovana a tolo-kevitra azo tanterahina momba ny fandraisan'ny herin'ny rivotra ny fifangaroan'ny herinaratra amin'ny taona 2020, 2030 ary 2050. Mila tetika maharitra ny tetezamita angovo.
Ny PREPA dia naka ny toeran-kevitra naroson'ny Vaomiera eropeana miorina amin'ny maodely PRIMES ho an'ny 2030, izay maminavina ny fitomboana kely kely eo amin'ny fangatahana herinaratra. PREPA dia nametraka tanjona kendrena amin'ny herinaratra sy fanaparitahana be fatratra, mba hahatratrarana ny tanjon'ny Fifanarahana Paris amin'ny fiezahana hahatratra ny fihenan'ny 80-95% amin'ny famoahana entona entona amin'ny 2050.
Ny sehatry ny herinaratra dia tsy maintsy afaka mamaly ny fangatahana herinaratra vaovao nefa tsy manasazy ireo tanjona kendrena amin'ny fampihenana ny famotsorana.
Ho famintinana ny tatitra dia napetraka tamin'ny 2020 ny herin'ny rivotra hahatratra 28.000 MW (raha jerena ireo lavanty herinaratra vaovao efa natolotra tamin'ny taona 2016 sy 2017 ary ny habetsahan'ny rivotra Kanadiana), ka ny herin'ny rivotra dia hitombo 1.700 MW isan-taona eo ho eo eo anelanelan'ny faran'ny 2017 sy ny fiandohan'ny taona 2020. ny folo taona manaraka hitombo 1.200 MW isan-taona eo ho eo izany hatramin'ny 2030, mahatratra 40.000 MW ny hery napetraka.
Noho ireo turbine rivotra vaovao ireo dia ny fandefasana ny sehatry ny herinaratra Espaniola hihena tamin'ny taona 2020 tamin'ny 30% raha oharina tamin'ny taona 2005 (taona fanovozan-kevitra ho an'ny rafitra varotra emission eropeana, ETS amin'ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy) ary 42% amin'ny 2030.
Amin'ny toe-javatra tsara indrindra, ny 100% amin'ny fanapahana ny rafitra herinaratra dia ho tratran'ny 2040. Ankoatr'izay, ny fifangaroan'ny herinaratra Espaniola dia hahatratra 40% amin'ny fangatahana fandrakofana misy fanavaozana amin'ny taona 2020, 62% amin'ny 2030, 92% amin'ny 2040 ary 100% amin'ny 2050.
Mba hanatanterahana ny fametrahana ny herin'ny rivotra vaovao apetraky ny scenario PREPA, ilaina ny fananana fahatsorana, fitoniana ary filaminana amin'ny fitsipika.
Araka ny talen'ny AEE, Juan Virgilio Márquez: "Ny maodely angovo ankehitriny dia tsy mifanaraka amin'ny tanjona napetrakay ho an'ny tenanay any Eropa. Ny drafitra angovo an'ny maodely vaovao dia tsy maintsy apetraka mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny fahitana sy ny fandrindrana ny politikan'ny transversal. Ho fanampin'izany, ny tsena dia tsy maintsy manome famantarana fampanjariam-bola sahaza ary tokony ho marina ny rafitra ara-bola. Ny fitantanana ny fizotrany dia manan-danja ary tsy maintsy misy tanjona sy mahaleo tena. Ny sehatry ny rivotra dia vonona ary mifaninana hanome ny rafitra ny fahaizan'ny rivotra takiana mba hahatratrarana ny tanjona decarbonisation, mamatsy mihoatra ny 30% ny angovo herinaratra amin'ny 2030. Miorina amin'ny scenario novolavolain'i AEE, ny herinaratra napetraka tamin'ny taona 2020 dia tokony ho 28.000 MW ary amin'ny 2030 dia 40.000 2050 MW izany. Amin'ny taona 60.000 dia XNUMX MW ny herin'ny rivotra napetraka ”.
Raha tratra ny scenario PREPA amin'ny fametrahana herinaratra, dia tokony hisy izany tombony ara-nofo. Ny sasany amin'ireny dia:
• Hihatsara ny fiarovana ny angovo Espaniôla satria nihena 18 tapitrisa taonina ny lanin'ny solika
• Midika asa 32.000 eo amin'ny sehatry ny rivotra izany
• Ny fandraisana anjara amin'ny GDP dia mihoatra ny 4.000 tapitrisa euro
• Hisoroka ny famoahana CO47 2 tapitrisa taonina
Ho an'ny sehatry ny rivotra Espaniôla dia hanana tombony lehibe toy ny:
- Famerenana ny asan'ny indostria ary ny teknolojia noho ny fametrahana herinaratra vaovao amin'ny taham-pahavitrihana sy ny habetsany mitovy amin'ny folo taona lasa.
- Ny fampandrosoana ny tsena anatiny dia hanatsara ny toerana ifaninanana (toekarena amin'ny ambaratonga, fitarihana teknolojia, matihanina mahay, sns.) an'ny orinasa Espaniola, izay hampitombo ny fanondranana any ivelany.
- Ny hetsika fikojakojana ny fampitaovana dia mitana andraikitra lehibe kokoa.
Ao amin'ny fanadihadiana 'Elemen ilaina amin'ny tetezamita angovo. Tolo-kevitra ho an'ny sehatry ny herinaratra ', ny AEE dia manolotra ny fananganana andiana fepetra mivaingana amin'ny sehatry ny herinaratra mba hanamorana ny fandraisana anjaran'ny angovo azo havaozina amin'ny fanatratrarana tanjona amin'ny 2030 sy 2050. Ireo fepetra ireo dia mifantoka amin'ny sehatra enina: ny fandrindrana ny drafitra sy ny rafitra , hetra, rafitra famatsiam-bola vaovao, ankoatry ny hafa.
Ny sasany amin'ireny fepetra mivaingana, asehon'ireo faritra samihafa, dia:
1 Ny drafitra sy ny rafitra mifehy
3 Fivoaran'ny teknolojia
Ny drafitra sy ny rafitra mifehy
Mamaritra tanjona tsy maintsy atao ho an'ny 2030 ho an'ny sehatra, mamela lalana mandroso (2031-2050) hahatratra ny tanjon'ny 80-95% fihenan'ny emissions CO2 amin'ny 2050.
Esory ny sarany amin'ny faktioran'ny herinaratra vahiny manome.
Mametraha rafitra marin-toerana amin'ny fametrahana angovo azo havaozina: rafitra tambin-karama miorina, làlana fampiharana ary fandaharam-potoana ho an'ny lavanty.
Manamora ny fampiasam-bola amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena mba hiantohana ny fanondranana ambiny.
• Mametraka rafi-ketra TONTOLO IAINANA izay manampy ny mpampiasa vola hampiasa vola amin'ny angovo mahomby sy madio, miorina amin'ny foto-kevitra hoe "mandoa ny mpandoto".
• Esory tanteraka ny hetra famoriam-bola amin'ny fanavaozana, toy ny saram-panavaozana ny faritra ary ny hetra famokarana herinaratra.
• Manaiky drafitra nasionaly ho an'ny herinaratra, izay mandrakotra ny sehatra rehetra, indrindra ny fitaterana.
• Ampiharo a rafitra mifehy izay mampiroborobo ny fizakan-tena sy ny fitehirizana angovo.
• Hametraka rafitra mifehy, toekarena na ara-bola izay mamporisika ny repowering sy ny fanitarana ny fiainana ny valan-javaboary amin'ny faritra manana loharanon-karena mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny vinavinan'ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny taona 2030 araka ny PREPA
Ny angovo azo havaozina dia hampihena ny vidin'izy ireo efa ho ny antsasaky ny taona 2020